Xanuunka dhimirka iyo isticmaalka muqaadaraadka oo wadajira | Suomen Mielenterveysseura
Antti muddo sanado ah ayuu cabayay khamri badan. Lixdii bilood ee ugu dambeysay wuxuu ah qof si aad ah u niyadjabsan inta badan. Antti ma helin hurdo wanaagsan oo maskaxdiisana waxaa ku wareegayay si joogto ah muuqaal maskaxeed khiyaali ah iyo fikirro.
Fikirka walaaca awgiis ayuu Antti wuxuu la xiriiray takhtarka xarunta caafimaadka, kaasoo u diray Antti inuu la kulmo kalkaaliyaha niyabjabka. Kulankii ugu horeeyay ee kalkaaliyaha niyadjabka Antti wuxuu u arkay mid lagu guuleystatay: Kulanka ka hor wuxuu ahaa mid aan laba maalmood waxba cabbin wuuna ku nafisay wadahadalkii kurbadii haysay. Wuxuu dareemay in inta la dhageeysanayo lana fahmayo.
Kulankii labaad iyo ki sedexaadba Antti wuxuu ahaa mid xoog u sarqaansan. Kalkaaliyaha niyabjabka wuxuu u sheegay Antti in wadahadalku usan faa’iido lahayn hadii uu Antti uu sarqaansan yahay. Kulankii waxay noqotay in la baajiyo, sababtoo ah Antti wuxuu yimid dhawr jeer isagoo sarqaansan.
Antti wuxuu helay daryeelka muqaadaraad reebista, taasoo uu horey uga dalbaday caawinaaddan dhanka sooshalka degmada. Antti aad ayuu u rabay inuu joojiyo cabbittaanka khamriga, taasoo lagu guuleystay oo xitaa ku caawisay daryeelka kadib unuu toosnaado. Antti intii daryeelku u socday ayaa qabatay xaalad kurbo xoog leh iyo dhaqan waxashnimo, taasoo laga yaabo iney sabab u tahay khamriga haya awgeed. Inkastoo Antti wuxu ku dhawaa inuu dhex ku joojiyo darjeelka muqaadaraad reebista dhaqanka waxashnimada dardeed, inkasoo uu dhameeystay.
Inkastoo uu laba bilood Antti wuxuu dareemayay weli kurbo xoog badan iyo rajo ala’aan. Antti wuxuu la ildaranaa daal joogto ah iyo xaalado cabsi iyo xanuun leh. Takhtarku wuxuu sheegay in jir ahaan uu caafimaad qabo.
Maxaa Antti la gudboon?
Kurbada iyo cabsida haysa Antti kama socoto oo kaliya isticmaalka khamriga tirada badan. Marka laga reebo isticmaalka mukhaadaraadka waxaa dhici karta in Antti uu qabo xanuunka dhimirka ama labamiyirlenimoda. Dadka isticmaala muqaadaraadka ee u jirran xanuunka labamiyirka ee leh calaamada makixiyanka ah, sida xalaadda kurbada iyo niyadjabka leh ee Antti ma aha kuwa tagaya haddii uu xitaa waqti dheer toosnaado. Bukaanka qaba labamiyirlenimada wuxuu u baahan yahay daryeelka dhibaatada muqaadaraadka iyo tan dhimirka.
Badanaa bukaanka u xanuunsan labamiyirka dhibkiisu wuxuu yahay, ma rabo in lagu daryeelo meel ku habboon. Helitaanka daryeelka caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay inta badan in qofku qumanaado waqti dheer, laakiin dadka qaba xanuunka dhimirka calaamadahoodii hore waxay saameeyn ku yelan karaan qumanaantiisa. isticmaalka muqaadaraadka wuxuu xitaa inta badan xoojiyaa calaamadaha xanuunka dhimirka.
Daryeelka bukaanka qaba labamiyirlenimada ujeeddada koowaad waxay tahay in inta badan laga jaro qabatinka aalkolada. Qabatinka aalkolada waxaa lagu daryeeli karaa tusaale ahaan A-klinikka. Marka la xaddido isticmaalka aalkolada ilaa iyo xad, markaas ayaa la bilaabi karaa daryeelka caafimaadka dhimirkatusaale ahaan rugta caafimaadka dhimirka. Si kataba ha ahaatee daryeelka xanuunka dhimirka iyo daryeelka muqaadaraadka waa la bilaabi karaa islamarkaas iyo isla goobtaastaas. Mustaqbalka ujeeddadu waxay tahay in la iskudayo in labada dhibaato lagu xaliyo iskumeel.
Antti waa inuu la xiriiraa tusaale ahaan xarunta caafimaadka oo uu faahfaahiyo xaaladdiisa. Antti sida loo maleeynayo waxaa faa’iido ugu jirtaa si uun qaabka daryeelka xanuunka dhimirka.